बालबालिकामा समस्या निम्त्याउने डाउन सिन्ड्रोम के हो ?
डउन सिन्ड्रोम भनेको एउटा वंशाणुगत रोग हो। मानव शरीरका कोषहरुमा २३ जोडी क्रोमोजोम हुन्छन्। २१ नम्बरको क्रोमोजोम जोडी नभएर तीन वटा हुँदा डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ। यसरी एउटा क्रोमोजोम बढी भएको बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखिन्छ। डाउन सिन्ड्रोमका लक्षणमा सानो कद हुनुदेखि गम्भीर मानसिक सुस्ततासम्म हुन सक्छ। यस्ता बच्चाको लालनपालन समेत...
बीबी उप्रेती उपयुक्त भोजन भनाईको अर्थ समुचित र सन्तुलित भोजन गर्नु हो । गलत तथा बेठिक तरिकाले गरिने खानपिन, खासगरि स्वास्थ्य र शारीरिक अवस्था अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी खाना खानु तथा संयोग– विरुद्घ अथवा बेमेल चिजहरुलाई एकैसाथ खाइने खानालाई अनुपयुक्त भोजन वा आहार भनिन्छ । जरुरत भन्दा ज्यादा र आपसमा आपसमा मेल नखाने खानेकुरा खानेबानीले...
खाेकी लाग्दा के नखाने ?
खोकी लाग्ने बिभिन्न कारण हुन्छन् । कुनै खोकी गम्भीर रोगको लक्षण हो भने सामान्य समस्यामा पनि खोकी लाग्छ । खोकी लागेको केही दिनमा निको नभए चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ । सामान्यतया खोकी लाग्दा यी खानेकुरा खानु हुदैन : कफी तथा चियाः खोकी लाग्दा कफी र दुधको चिया खानु हुदैन । यसले घाटीलाई सुख्खा बनाउने र केही चिज निल्दा समेत गाहे हुन्छ । जंक...